Bato reMDC-T Roendesa Mberi Kongiresi Yekushara Hutungamiri kuMwedzi waGunyana
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Thokozani Khupe nehutungamiri hwebato ravo.
Bato reMDC-T riri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozane Khupe raendesa mberi kongiresi yaro kana kuti extra-ordinary congress yekushara hutungamiri hwebato kusvondo rekutanga kwaGunyana.
Kongiresi iyi yanga ichifanirwa kuitwa muna Chikunguru, asi mutauriri webato iri VaKhalipani Phugeni vaudza Studio 7 kuti kuita kongiresi iyi mwedzi unouya kunoisa hupenyu hwevanhu munjodzi yechirwere cheCovid-19.
VaPhugeni vanoti komiti mbiri dzepamusoro dzebato ravo dzinoti National Council, neStanding Committee, ndidzo dzakasvika padanho rekuendesa mberi musangano uyu mushure mekuona kuti musangano wekongiresi unopindwa nevanhu vakawandisa kudarika makumi mashanu ari kubvumidzwa kuungana pari zvino pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Bato iri raifanirwa kuita musangano uyu mwedzi unouya sezvakatarwa nedare repamusorosoro reSupreme Court pagakava rekuti ndiyani anofanirwa kutungamira bato iri pakati paMuzvare Khupe naVanelson Chamisa, avo vane bato ravo reMDC Alliance.
Asi VaPhugeni vanoti vachitevera mutongo wedare uyu, vane mukana wekusvika kutanga kwaGunyana kuti vange vaita musangano wekusarudza hutungamiri hutsva uyu.
Studio 7 yawana mashoko ekuti musangano uyu wave kuzoitwa kubva musi wa 04 kusvika musi wa 06 Gunyana.
VaPhugeni vanoti vachaita musangano uyu vachitevedzera mitemo yebazi rezvehutano mukudzivirira kupararira kweCovid-19, uye vachange vachishandawo naro kuti vakwanise kuenderera mberi zvisingaise nhengo dzebato ravo munjodzi.
Vanoti kuendeswa mberi kwemusangano uyu hakufanirwe kuonekwa sekunge Muzvare Khupe vari kuda kutenga nguva yekutiu vamboramba vari pachigaro, sezvo vasiri ivo vakaendesa musangano uyu mberi.
Huwandu hweVanhu Vabatwa neCovid-19 Nyika Yose Hunodarika Zviuru Gumi